Qoor-Qoor oo Suxufiyiinta ku sifeeyay Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
Qoor-Qoor oo Suxufiyiinta ku sifeeyay Al-Shabaab
Madaxweynaha Galmudug Qoorqoor oo shalay dib ugu laabtay deegaanada Galmudug ayaa maanta magaalada Gaalkacyo uga qeybgalay munaasabad si gaar ah loo soo agaasimay oo loogu duceenayay saraakiishii, masuuliyiintii iyo dadkii ku naf waayay qaraxii kooxda Al-Shabaab ka geysteen Galkacyo bil ka hor.
GAALKACYO, Soomaaliya - Madaxweyne Qoorqoor oo shalay dib ugu laabtay deegaanada Galmudug ayaa maanta magaalada Gaalkacyo uga qeybgalay munaasabad si gaar ah loo soo agaasimay oo loogu duceynayay Saraakiishii, mas'uuliyiintii iyo dadkii ku naf waayay qaraxii kooxda Al-Shabaab ka geysteen Magaaladda bil ka hor.
Qoorqoor ayaa weerar toos ah ku qaaday Suxafiyiinta iyo guud ahaan warbaahita tabisa wararka deegaanada Galmudug, isagoo ku tilmamay kuwa buunbuuniya wararka Kooxda Al-Shabaab.
Madaxweyne Qoorqoor wuxuu maan-laawa-yaal ugu yeeray Wariyeyaasha soo tabiya arimaha amniga ee ka jira deegaanada Galmudug, isagoo sheegay in aysan Al-Shabaab ka sokeyn oo ay la mid yihiin.
“Kuwa dhibaatadooda buunbuuniya, kuwa fariimahooda u hogaansama iyagoo naf yar xeeladeysanaya ama qaarkoodba dano raqiis ah ka leh, waxay noola mid yihiin shabaabka," ayuu yiri Qoorqoor.
“Waxaad arkeysaa dad dhahaya Shaabaab baa meel hebla soo galay, Shabaaba saas yeelay, waa maan-lawa-yaal aan garaneyn waxa ay ku hadlayaan," ayuu sii raaciyay.
Wariyeyaasha wuxuu ku sifeeyay kuwa iidheh ama xayeysiis u sameynaya Al-shabaab. Wuxuu yiri: “Waxay rabaan cadowgaas in ay dadka u xayaysiiyaan, iyagoo si xun u fakaraya”.
Axmed Cabdi Kaariye, wuxuu sidoo kale sheegay in aan la tabin karin war la xariira haddii Al-Shabaab qabasato deegaan kamid ah deegaanada Galmudug.
“Shabaab meeshi ay soo galaan iyo hallki ay yimaadaan si in la iska qabto ah ayaa isugu sheegeynaa ee uma sameyneyno wax u eg in dadka lagu qalqal galiyo," ayuu yiri isagoo ula jeeda in haddi Kooxda Al-Shabaab ay deegaan weerarto ama qabsato aysan saxaafaddu tabin karin.
Tan iyo markii Qoorqoor loo doortay Madaxweynaha Galmudug sanad kahor, waxaa faraha ka baxay amniga deegaanada maamulkaas, iyadoo Al-Shabaab ay dhowr meel oo kala duwan falal amni darro ka geystay muddooyinkii danbe.